Fanamboarana sary amin'ny rindrina anatiny anatiny Fividianana loko anatiny any China
Heshida mivarotra mafana azo sasana tsara sy manohitra ny famelezana ho an'ny rindrina fanaka anatiny
Fitambaran-javatra azo ampiharina: 100-120 metatra metatra / Kintana 10kgs: Maty maina ny gloss: Tropatolo ~ dimy ambin'ny folo (30 ~ 50) Minitra. Atolotry ny atitany: Avelao ny Telopolo ~ Dimampolo (30 ~ 50) Minitra alohan'ny hamerenana azy. Maina amin'ny alàlan'ny: dimy (5) henjana ny horonan-tsarimihetsika maina: 0.2-0.3mm / Fomba fampiharana fampiharana karatra: hosodoko, hodi-doha na baomba tsy manidina. Fonosana: 5kg / Bag, kitapo / baoritra manify: Ny fampidirana vovo-dronono ho rano dia 1: 1,4 ~ 1: 1,6. Kolontsaina misy: Misy loko fototra 9, afaka mampiasa ireo loko 9 fototra miaraka amin'ny endriny samihafa mba hahazoana ...
Heshida Defender Damp manaporofo loko sary anatiny
Heshida Fahasambarana Mamonosana vovoka vita amin'ny rindrina anatiny